IZIZATHU EZI-4 ZOLUSU LWAKHO LOKUYA EMZIMBENI ZISIYA ZISIBA MBI | UTHINTELO - IIMPAWU ZEMPILO EZINGAQHELEKANGA
Nokuba unempumlo egobileyo kunye namehlo arhawuzelayo ukubonisa oko okanye uyamazi umntu owenzayo, kukho umxholo ophambili phakathi kwabagulayo ukuba ixesha lokungezwani komzimba liqhubeka ngathi liya lisiba mandundu.
Iindaba ezimnandi: Awuyicingeli. Iindaba ezimbi: Awuyicingi. Ukunyanga komzimba kunokuba kubi ngokuhamba kwexesha, kwaye kukho izizathu ezibonisa ukuba kutheni. Nokuba ziphi na izinto ezenza mandundu iimpawu zakho, unokubeka ezi zisombululo ziluncedo ekusebenziseni kakuhle. Okwangoku, nazi izizathu ezimbalwa onokuthi ujongane nokuthimla ngakumbi kunesiqhelo. (Philisa umzimba wakho uphela noRodale I-12-day detox yesibindi yempilo yomzimba iyonke .)
ifloridastock / shutterstock
Ukunyuka kwe-allergies yenye yeengozi ezininzi zokukhula ngokuthe chu kweplanethi yethu. 'Ixesha lePollen liba lide kwaye linamandla ngakumbi, utshilo u-Allergy & Asthma Network IPurvi Parikh, MD . Izityalo zisebenzisa amanqanaba aphezulu e-carbon dioxide emoyeni ukwenza phantse 'i-superpollinators,' utshilo. 'Oko kwenza ukuba amaxesha e-allergy aqale kwangoko kwaye aphele kamva.'
Ukutshintsha kobushushu beWacky kunokubangela ukuba izinto zibe mbi nangakumbi. Ngokwesiqhelo, ukuba izityalo zigutyungelwe yingqele ngoNovemba, ngekhe kubekho impova emoyeni kude kube ngoMatshi olandelayo okanye njalo, uyachaza uParikh. Kodwa ngeentsuku ezingama-60 ngoJanuwari eziqhelekileyo ngakumbi kunanini na ngaphambili, izityalo zingaqala ukuvelisa impova xa kungengobuchwephesha basentwasahlobo okwangoku, kubangela ukwaliwa komzimba kwinkqubo. Nokuba akukho pollen isemoyeni ngexesha lobusika, utshintsho olukhulu kwimozulu lunokubangela iimpawu zokungabikho komzimba, uParikh wongeza. 'Ukuba ngaba ngama-65 degrees ngoLwesine kwaye yehla ukuya kwi-30s kwimpelaveki, oko kunokubangela i-vasomotor rhinitis, ephantse ilingise i-allergen rhinitis kunye nokudibana kwayo kunye noxinzelelo lwe-sinus, utshilo. 'Ubushushu obugqithisileyo bunokubangela ukudumba ngaphakathi kwempumlo ngendlela efanayo ne-allergen.'
Ukumoshwa komoya grynold / shutterstock
Mhlawumbi ufudukele kwisixeko esitshisayo kutshanje okanye umgangatho womoya wendawo yakho ukhule ulihlwempu. 'Okumangalisayo kukuba, i-allergies imbi kakhulu ezidolophini kunasezidolophini ngenxa yongcoliseko lomoya kunye namanqanaba aphezulu e-ozone,' utshilo uParikh, nangona abantu abasedolophini benokuthi babhencwe kwizityalo ezininzi. Nokuba kukwisixeko esinye, ukunganyangeki kwakho kunokuba kubi kakhulu ngenxa yokuba ufudukele kufutshane neyona ndlela ixakekileyo. (I-Allergies ikwenza uzive udiniwe? Nazi ezinye izizathu ezisixhenxe zokudinwa lonke ixesha.)
Uxinzelelo Ukugxilwa kwebandandll / shutterstock
Yongeza uxinzelelo olungapheliyo kumxube kwaye i-allergies inokuziva ngathi kukuphela kwehlabathi. 'Uxinzelelo lubangela ukudumba kwaye lungenza umzimba ube neempawu ezigwenxa,' utshilo uParikh. Uxinzelelo lunokuvelisa ezinye zeempawu ezinje ngokungezwani komzimba, njengentloko ebuhlungu okanye ukuphefumla okukhawulezayo, ngokuyintloko ukuphindaphinda ukungonwabi.
Iminyaka yakho Elena schweitzer / shutterstock
Kuthekani ukuba ubusoloko uhlala kwidolophu yakho etshayayo okanye kwisitrato esikwisitrato esifana nomthi kangangeminyaka kwaye ngoku uye waphendula? I-Allergies inokuba mandundu ngokuya ikhula ngenxa yokuba uye wabhencwa kwizinto ezibangela ixesha elide, utshilo uParikh. Kuthatha ukubhengeza okuphindaphindiweyo ukukhulisa ukwaliwa. Kungathatha ixesha elithile ukuba amajoni omzimba athathe isigqibo sokuba ayiyithandi le allergen. '
imifanekiso yokulunywa sisigcawu ebantwini
i-lymph nodes ezidumbileyo phantsi komhlathi we-covid
Ungafumana njani ivumba kunye nokunambitha kwakhona
zithetha ntoni iingelosi ezingama-444